Mampiseho Ny Fifanenjanan’ny Vehivavy Sy Ny Lehilahy Kiobàna Ny Firoborobon’ny Famoronana Orinasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2013 10:20 GMT
Nahatonga ny fitomboan'ny miasa tena (cuenta propia), raiso amin'ny hoe tsy ampiasain'ny fanjakàna, ny fiovàn'ny lasitra ara-toekaren'i Kiobà. Tsy zava-baovao any Kiobà ny Miasa Tena; iray amin'ireo andrin'ny fepetra ara-toekarena vao haingana noraisin'ny governemanta izy io. Kanefa nampibaribary fifanipahana sy fifanenjanana teo anivon'ny fianakaviana Kiobàna io lalàna io, ary indrindra manoloana ny sokajim-fifandraisan'ny lahy sy ny vavy.
Nanomboka ny taona 2010, nampiditra tsikelikely asam-barotra sy fifanakalozana maro io fomba famokarana vokatra sy tolotra io. Araka ny gazety Trabajadores [Mpiasa], ny feon'ny Central de Trabajadores de Cuba, nisy olona 436.342 niasa tao amin'io sehatra io tamin'ny faran'ny volana Jolay 2013
Anatin'io vanim-potoana io no nidiran'ireo vehivavy ho amin'ny asa tena any Kiobà. Araka ny Oficina Nacional de Estadísticas(Birao Nasionalin'ny Antontanisa), niakatra ho 62.000 ny isan'ireo vehivavy ao amin'io sehatra io tany akaikin'ny taona 2011.
Ny nananganana vao tsy ela akory izay ny Entrepreneurial Women site [es] tranonkalan'ireo Vehivavy Mpandraharaha izay mifantoka amin'ny maha-lahy sy vavy ary ny fanànana asa dia manamafy ny filàna fanavaozana izay tsy ara-toekarena fotsiny, fa ihany koa ny fomba famaky sy fijery ny hoe miralenta.
Amin'izany, ny fampiasana ny fotokevitra hoe orinasa dia hipoitra ho toy ny andry manana lanja amin'ny fifandraisana vaovao eo amin'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny tontolon'ny asa, izay tsy hahitàna ny fanambaniana ny vehivavy, sy manome vàhana ny famoronana orinasa bitika tarihan'ireo vehivavy sy toe-karena ifanohànana.
Arindran'ny Servicio Informativo de la Corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe ilay tranonkala [es] (SEMLAC amin'ny fiteny Espaniola, masoivohom-baovao an'ny vehivavy), tantanina avy ao Kiobà, ary misy sokajy fito izay andefasan'izy ireo gazetin'asa, valina fanadihadiana, ary lahatsoratra fanehoan-kevitra.